AFRICOM, Oo War ka soosaaray Duqeyntii Gobolka Shabeelaha Hoose – Kismaayo24 News Agency
AFRICOM, Oo War ka soosaaray Duqeyntii Gobolka Shabeelaha Hoose
by Ahmed sudani 13th December 2017 018
Taliska Ciidamada Mareykanka Afrika ee (AFRICOM) ayaa war ka soo saaray duqayn xilli dambe oo habeen ka hor ka dhacday Degaanka Mubaarak oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wuxuu sheegay Mareykanka in weerarkaasi uu yahay mid lagu taageeraayay Ciidamada Isbahaysiga, loogana hortagey khatar ka dhan ah bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho.
AFRICOM wuxuu meesha ka saaray in weerarkaasi uu khasaaro u gaystay dadka rayidka ah, wuxuuna ku hanjabay in Ciidanka Mareykanka ay sii wadi doonaan tallaabooyinka ugu haboon ee lagu sugayo amniga.
“Ciidanka Mareykanka waxay sii wadi doonaan inay adeegsadaan tallaabooyinka ugu haboon ee lagu ilaalinayo ammaanka muwaadiniinta Mareykanka, iyadoo xididada loo siibayo halista argagixisada.” Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay AFRICOM.
Waxaa kaloo lagu yiri “Waxaa sidoo kale qayb ka ah iskaashiga Ciidamada AMISOM iyo Ciidanka Qaranka Soomaaliya, kuwaa oo ku mideysan hawlgalada ka hortagga argagixisada, laguna beegsanayo goobaha ay argagixisada ku tababartaan, meelaha ay ku dhuumaaleystan ee Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka.”
Ururka Al-Shabaab, ayaa shalay soo bandhigay sawirro muujinaya gaari caasi ah oo sida ay sheegeen lala eegtay duqeyntii ka dhacday Degaanka Mubaarak, oo siday khudaar, waxayna Shabaabka beeniyeen in duqayntaasi lala eegtay xubno iyaga ka tirsan.
Dhagayso:-Dagaal Ciidamad Dawlada Iyo Alshabaab Ku dhexmaray Gobolka Baay
Sirdoonka Somalia oo isku Khilaafay Gaarigii Mareykanka ku duqeeyay Sh/hoose
DEG DEG: Dagaalkii u dhaxeeyay alshabaab iyo ciidamada huwanta oo saakay dib uga qarxay deegaanka….
Tifaftiraha K24 15th February 2017
Sawirro: Guddoomiye Eng Yariisow oo Xalay kormeer ku tagay qaar kamid ah Isgooysyada Muqdisho
admin 12th March 2018